Iskodland waxay ku biirtay heshiiska qaybta bulshada ee geospatial - Geofumadas
Ogast, 2020 Cartografia, Geospatial - GIS, tabo cusub
Dawladda Scottish-ka iyo Gudiga Geospatial waxay ku heshiiyeen in laga bilaabo Maayo 19, 2020 Scotland waxay qayb ka noqon doontaa Heshiiska Geospatial ee waaxda guud ee dhowaan la bilaabay.
Heshiiskan qaran wuxuu hadda beddeli doonaa heshiiska hadda jira ee Mawjadland (OSMA) iyo qandaraasyada Greenspace ee Scotland. Isticmaalayaasha Dowladda Scotland, waxay ka kooban yihiin 146 ururada xubnaha ka ah OSMA, waxay hadda heli doonaan xogta nidaamka hawlgalka iyo khibradda PSGA.
Waxay ku biiri doonaan xubno ka tirsan waaxda dadweynaha England iyo Wales si ay u helaan tiro xog ah oo ah khariidad kumbuyuutar oo ku saabsan Ingiriiska oo dhan, oo ay ku jiraan Cinwaanka iyo Macluumaadka Wadada. PSGA waxay sidoo kale bixin doontaa taageero farsamo oo kordhaysa iyo marin u helka xogta cusub mustaqbalka.
PSGA cusub ayaa la rajaynayaa inay bixiso faa'iidooyin muhiim ah oo bixin doona macluumaad lagu taageerayo go'aan qaadashada, wadida waxtarka, iyo sii wadida taageerida gaarsiinta adeegga dadweynaha.
Sida laga soo xigtay Steve Blair, Maamulaha Guud ee Sahanka Naafada, "Waxaan ku faraxsanahay in Scotland ay ku biirtay PSGA oo abuurtay qorshihii ugu horreeyay ee wadajirka ah ee macaamiisha guud ahaan qaybaha bulshada si ay u helaan xogta nidaamka hawlgalka."
"PSGA waxay siisaa fursado xiisa badan labadaba nidaamka hawlgalka iyo macaamiisheena waxaanan ku kalsoonahay inay u furi doonto faa iidooyin bulsheed, deegaanka iyo dhaqaalaha England, Scotland iyo Wales."
Albert King, oo ah Madaxa Xogta Dawladda Scottish-ka, ayaa yidhi: 'Dawladda Scottishku waxay soo dhoweyneysaa fursadaha ay siisay PSGA cusub.' "Heshiiskani wuxuu xaqiijinayaa sii waditaanka helitaanka xogta taageeraysa bixinta adeegyadayada dadweynaha waqti aan ku tiirsanaan doonno iyaga si ka badan sidii hore."
"Intaa waxaa sii dheer, waxay u kordhisay tan si ay uga kooban tahay tiro balaadhan oo ah barnaamijyo iyo adeegyo cusub oo leh awood ay si weyn ugu horumarin karto adeegyada guud ee bulshada iyada oo la wanaajinayo go'aan qaadashada iyo badbaadinta waqtiga, lacagta iyo nolosha."
PSGA waxay bilaabatay Abriil 1, 2020 waxaana loogu talagalay inay ka faa'iideysato waaxda guud, ganacsiyada, horumariyeyaasha, iyo tacliinta. Inta lagu jiro heshiiska 10-ka sano ah, nidaamka qalliinka wuxuu gaarsiin doonaa jiilka xiga ee macluumaadka goobta ee Boqortooyada Ingiriiska wuxuuna u beddelayaa sida dadku u helaan, ula wadaagaan ugana cusbooneysiiyaan xogta geospatial.
Wixii macluumaad dheeri ah booqo www.os.uk/psga
Post Previous«Previous Geopois.com - Waa maxay?
Post Next Aragtida Geospatial iyo SuperMapNext »